कुवैतमा काम गर्ने एउटी कामुक नारीको आत्म कथा । | जिन्दगीको पानाहरु
कुवैतमा काम गर्ने एउटी कामुक नारीको आत्म कथा ।
कुरा सन् २००७ देखि अहिले सम्मको हो। मेरो नाम कल्पना श्रेष्ठ हो अर्थात् स्कुल पढदाको नाम चीन कुमारी श्रेष्ठ हो । म धादिंङग जिल्लाको बिकट गाँउ जोगीमारा गा. वि.स ७ मा हो म मध्यम परिवारमा कृष्ण लाल श्रेष्ठको ठुली छोरीको रुपमा आज भन्दा २७ वर्ष पहिला जन्म लिएकी थिए । मेरो बल्यकाल आमा बाबा को लाडिलो प्यारमा बितेको थियो । त्यसैले होला म पुल पुलिएकी थिए । म बच्चा देखीनै चुल बुले सोभावकी थिए । मैले चाहे पछी हर कुरा मेरा बा आमाले पुरा गरि दिनु हुन्थियो ।
मेरो बुद्दी बिग्रिएर भनौ या त उन्मत्त भएर आफु भन्दा नाजुक अबस्थाको केटा संग सुटुक्क माया पिरती गाँस्न पुगे सन् २००४ तिर उसको र मेरो बिबाह भयो गरिविको कारण मेरो आमा बाबा संग टाढा भए ।
गरिबीको कारणले पिरोलिना थाले त्यतिकैमा हामी दुई बाट एक सन्तान पैदा भयो । झन भारी माथि सुपारी भने झैँ आर्को बोझ थपियो । अनी पैसाको लागि जिबन गुजर्नको लागि केहि बाँकी राखिन मेरो आफ्नै शरिर समेत बेच्न थाले । केहि समय पछि हामि दुवै जना काठमाडौको नरदेविमा सानो पसलमा काम गरेर बस्यौ त्याहाँको काम बाट प्राप्त पैसाले पनि जिबन धन्न सकिएन । मेरो बहिरी यौन सम्पर्क र जागिरले परिवार चल्न नसके पछी म बाहिरी देश जाने निधो गरे । अनि फेरी तीन जनै गाँउ गयौ मैले केहि समय पहिले नारायनघाटको स्यानु भन्ने एजेन्टको मा गएर विदेश जाने निधो गरे । अनि धादिंङ गएर हतार हतार पास पोर्ट बनाए । लग भाग ४० दिन पछी भिसा आयो । कुवेतको भिसा हात लागे पछी मैले उसलाई सोधे काम कस्तो हुन्छ ? पैसा कत्ति हुन्छ ? उसले मलाई भन्यो १५ हजार् तलब हुन्छ । एक परिवारको ३/४ जना भन्दा बढि बच्चा हुदैन / ८/१० घण्टा कम गरे पछी सुतेर बस्न पाइन्छ । त्यो कुरा सुने पछी म ४० हजार पैसा ऋण खोजेर कुबेत तिर हिडने पक्का भए २००७ को पहिलो हप्ता मेरो मनले साटेको जिबन साथी मदन कुमार श्रेष्ठ पियारो मुटुको टुक्रा साइरस उ त्यती बेला ३ वर्ष को थियो ।
उनीहरुलाई छाडेर धेरै पैसा कमाएर परिवार सुखमा बस्ने सपना बोकेर भोलि पल्ट भालेको डाकमा गाँउको देवर सुवास संग दिल्ली हिडे । दिल्ली मा गएर सात दिन बसे पछी बल्ल कुवेतको लागि जहाज छाड्ने निधो भयो । जब जहाज छाड्ने बेलामा गाँउ घर बाबा आमा परिवारका सम्झना आयो झनै मुटुको टुक्रा छोराको यादले सतायो । मुटु दरो बनाए ३ साल पछी ४/५ लाख रुपिया लिएर मेरो छोरा मेरो जिबन साथी संग बस्छु भनेर जहाज चढे । जब कुवेतको एयरपोर्टमा आए सायद म एक्लै नेपाली थिए होला । त्यस जहाजमा सेतो कपडा लगाएको मान्छे मेरो नजिकै आयो त्यो मेरो मालिक रहेछ उसले लगाएको दिसदासा रहेछ पछी थाहा पाए । मलाई लिन आएको मालिक रहेछ मेरो नजिकै आएर व्वाट इस यौर नेम ? भनेर सोधो मैले उत्तर दिए मै नेम इज चीन कुमारी त्यस पछी कम कम भनेर पजेरोमा राखेर लग्यो । मलाई घरमा लागे पछी ५ तेले बिल्डिंग देखायो यहाँको कोठा टोइलेट बाथ रूम जम्मै साफ गर्नु पर्छ भन्यो त्यती बेला नै मेरो हंग्सले ठाउँ छोड्यो यत्रो काम कसरि गर्ने ८ घण्टा काम गर्ने सुरमा आएको मान्छे २२/२३ घण्टा काम गर्नु पर्ने भयो । मन दरो बनाएर कम गर्न थाले तर भाषा नजानेको कारण कहिले घर मालिक त कहिले पाहुनाको यौन सोसन हुन् थाले यौन शोषणमा म आफै यौनपिपासु भएको कारण त्यती गार्हो परेन । त्यस घरमा टेलीफोन भने चलाउनु पाईदो रहेछ २ महिना पछी फोन किने अनि नेपाली दाई भाईको खोजीमा लागे त्यतिकैमा पूर्व तिराको दाईको नम्बर हात लग्यो । १ दिन २ दीन गर्दै हामी दुई को माया गाढा भयो । अब मेरो सर सपना यती रह्यो घरमा १ लाख पैसा पठाए । अनि त्यतिनै बेला कुवैतमा भिभा फोन साथी बाट लाई फ्री कल शुरु भयो सुनमा सुगन्ध भने झैँ भयो । म चनाखो केटि भएको कारण कुवेतिलाई पहिले नै यहाँ मेरो श्रीमान छ भनेको थिए भने पछी मलाई यौन सम्बन्धको गार्हो परेन जति बेला चाहिए पनि उनि आउथे ।
यसरी दिन बित्दै थियो । हामी दुबैको चाहना अनुसारनै हामी नेपाल जाने २ महिना छुट्टी बिताउने निधो ले हामी काठमाण्डु गयौ अनि २ महिना बिताएर आयौ । म आएर कुवेतीको घरमा बस्न नसक्ने अवस्था भएको कारण मलाई बाहिर दाईले अरु संग ऋण खोजेर निकाले निकाले पछि म उनि संग २/३ महिना मात्र बसे किनकि म यौन को तृसना उसको सम्बन्धले पुगेन त्यसैले म कहिले सिरियाली कहिले बंगाली कहिले मस्री कहिले अमेरिकाली को सम्बन्धमा बचेको छु । मेरो घर परिवारमा सारा कुरा भुलेर म त्यसै भौतारी रहेको छु आज मेरो सारा सपना यौन तृसना को कारणले गन्त्व्य हिन भएको छ । यौन को जोसको कारण कुवेतमा रहने नेपाली दिदि बहिनि हरु मेरो जस्तो हालत नबनोस । आफ्ना उदेश्य, आफ्नो परिवार र पारिवारिक धरातल अनि जिवन साथीलाई कहिल्यै नविर्सनु होला यो मैले भनेकी होईन मेरो अनुभवले भनेको हो जिवन लामो छ कामुक बनेर यौनप्यासि बन्दैमा जिन्दगिको मजा नहुँदो रहेछ समयमै होस पुर्यउनु होला । यती मेरो जिबनमा घटेको बर्णन गर्दै बिदा हुन्छु ।